Kutumira Tsamba | Cheap Shipping Service | Freight Forwarder | AUSFF
Tora kero yepositi yeAustralia uye edza yedu One kubva paPlan
nokuti YEMAHARA uchishandisa Promo kodhi: HI5
Isu tiri VARIRWA uye Ticharamba tichiendesa, Ndokumbira kuti uone Covid-19 Updates kune mazhinji kusvika parizvino shanduko
1. TENGA MUZVO ZVINHU ZVEUU ZVITORO ZVEMAOKO
Unogona kutenga mune chero chitoro cheAU uye uine mapakeji akatumirwa kukero yako yeAusff. Zvakare tinogona kukubatsira nekutenga.
2. SUNGISA MABHUKU AUNO KANA KUTI UNGAAENDESE KURURAMA
Unogona kusanganisa mapakeji ako kubva kuzvitoro zvakasiyana kuita muhombe imwe chete, kuti uchengetedze pamutengo wepasi rose wekutumira.
3. TUMIRA PAKURE KWAKO
Mushure mokunge mapakeji ako agadzirira, sarudza imwe ye nzira dzakawanda dzekutumira iyo yatinopa. Tine zvikwereti zvakakura kubva kumakambani anotumira, saka mari yekutumira yakaderera kwazvo.
Amazon Kugadzirira Sevhisi
Tinopa zvinotevera Amazon Gadzirira Services kuvhara zvinhu zvese senge
Asina kusimba / Girazi
Apparel, Mucheka, Plush, uye Machira
Yakapinza, Diki, Kunyora kurongedza
Zvinhu ZvevakuruVERENGA ZVAKAWANDA
Ungade here Kutenga kana Kutengesa paEbay.com.au uye kuongorora nyika yemikana $$$$
Taura nevashandi vedu vanogona kubatsira nezvinodiwa zveEbay.
Worldwide** Kutumira Service
Ndokumbira utarise Yako Nyika Nyika Zvinodikanwa
** kusabvumirwa kunoshanda
Sarudza Nyika Yako Afuganisitani Arubhaniya Arujeriya American Samoa the national Angola Angwira Antigua & Barbuda Argentina Arumeniya Arubha Ositireriya Ositiriya Azabhaijani Bhahamasi Bhahareni Bhangiradheshi Barbados Bherarusi Bherujiyamu Belize Benin Bhemudha Bhutani Borivhiya Bonaire Bosnia & Herzegovina zimbabwe Bhuraziri Bhuruneyi Bharugeriya Burkina Faso Burundi Kambodhiya Kameruni Kanadha Canary Islands Kepu Vhedhi Cayman Islands Yepakati Ripabhuriki Afrika Chadhi Chile China Korombiya Komorosi Kongo Congo, DRC Zvitsuwa Kuku Kosita Rika Kiroshiya muCuraçao Saipurasi Czech Republic Dhenimaki Jibhuti Dhominika Ripabhuriki Dhominika Mabvazuva Timo Ekwadho Egypt E Savhadho Ikwetoriya Gini Eritrea Esitoniya Ithiyopiya Falkland Islands Faroe Islands Fiji Finirendi Furanzi French Guiana Gabon Gambiya Georgia Jerimani Ghana Gibhurata Girisi Girinirendi Grenada Guadeloupe Guam Guatemala Guernsey Gini Bhisau Guinea Republic Guyana Haiti Honduras Hong Kong Hangari Aisirendi India Indonezhiya Iraki Ayarendi Izirayeri Itari Ivory Coast Jamaika Japani Jersey Jodhani Khazakisitani Kenya Kiribati Kosovo Kuweti Kijisitani Laos Rativhiya Rebhanoni Lesotho Raibheriya Liechtenstein Rituaniya Rukuzemubhogu Macau Masedhoniya Madhagasika Malawi Marazhiya Marudhivhu Mali Malta Zvitsuwa Masharo Martinique Mauritaniya Morishiyasi Mayotte Mekisiko Maikironezhiya Morodhovha Monako Mongoriya Mondenegiro Motserati Moroko Mozambiki Namibhiya Nauru Neparo Netharenzi Nevis New Caledonia Nyuzirendi Nikaraguwa Naija Naijeriya Nyu Maodzanyemba Zvitsuwa Mariyana Noweyi Omani Pakisitani Palau Panama Papa Nyu Gini Paraguay Peru Firipaini Porendi Putugaro Pota Riko Kwata Reunion Island Romaniya Rashiya Rwanda Saba Samoa Sao Tome Saudhi Arabhiya Senegal Serbia Secheres Sierra Leone Singapowo Sirovhakiya Sirovhinyiya Zvitsuwa Soromoni Somaria Somaliland Rep Chamhembe Afrika Chammhembe Koria South Sudan Speini Shiri Ranga St Vincent St. Barthelemy St. Eustatius St. Kitts St. Lucia St. Maarten Suriname Sikwazirendi Siwidheni Siwizarendi Tahiti neFrench Polynesia Taiwan Tajikisitani Tanzania Tairendi Togo Tonga Trinidad & Tobago Tunisiya Teki Turks & Caicos Tuvalu Uganda Ukireni Mubatanidzwa Arabhu Emeretsi United Kingdom nyika dzakabatana Uruguay US Virgin Islands Uzebhekisitani Vanuatu Venezuela Vietnam Yemeni Zambia zimbabwe
YAKO IMA STOP LOGISTICS SHOP YEMAHARA MBIKO NEGUNGWA RENYAYA
KUMBIRA MAHARA QUOTE
Pasi rose ndege yekuchengetedza ndege
Mazuva ese masevhisi ekubatanidza eImport uye Export
IATA yakananga kutumira
Multiple mutengesi mubatanidzwa
Kupatsanura uye zano rekuyera
Duty drawback zvirevo
Tsika Duty Dzosera
Mutero uye Kutakura AUDITS
Yakagadziriswa Kutumira masevhisi kune izvo zvinodiwa nemunhu
Masuo kusuo zvinotumirwa - Kunze uye Export
Vatengi vanobatanidza manejimendi
Internet yekutakura nhumbi uye kutsvaga kweExport / Export mitoro
Warehousing uye ekuchengetera zvivakwa
Kurongedza uye kurongedza zvekare zvinhu
Cargo marine inishuwarenzi
Kutakura kwekufambisa kubvunza
Kunze uye Kutengesa kunze kwegungwa kutakura
LCL Chikamu Chine Midziyo
FCL Yakazara Container Mitoro
Multiple mutengesi mubatanidzwa (LCL uye FCL)
Yakajairwa nhumbi (breakbulk)
Unoda Aussie Bhizinesi Partner?
Unoda Kutumira kuAustralia? Hamuzivi kuti ungapinda sei muKutengesa Chain
Mufashoni & Apparel
Kuvaraidza uye zvimwe zvakawanda
Kupedza Vatengi Services
Isu tinopa masevhisi kune ese End Vatengi (EC) uye Diki uye Medium Bhizinesi (SMB)
Kuchengetedza kwemahara kwemazuva makumi matanhatu
Service Concierge service
Diki uye Pakati Pakati Bhizinesi Services
Kutumira michina inorema inosanganisira kuputsa, kurova, kuvharira uye kusimudzira kune zvivimbiso zvekutakura) pasirese
Yakananga masevhisi ekutakura anorema michina nendege negungwa
Yega-Rongedza inofamba midziyo inowanika Australia yakafara gonhi pasuo kana musuo kuchiteshi pasirese
LCL gungwa rekusanganisa mitoro masevhisi kubva kumaguta ese eAustralia
Midziyo yekuzvifambisa yega inowanikwa kunzvimbo zhinji dzepasirese
Kunze kwenyika uye kutumira kunze kwemhepo mabasa ekubatanidza masevhisi
Yepasirese kukoshesa kutakura nendege masevhisi enguva inononoka kutakura mweya
Yakanyatsodzidziswa mutengi yakanangana nepasi rose kutakura zvinhu
Australia Nhamba 1 Yekutakura Vanotakura
Australia mazuva ese inopinda munzvimbo yepamhepo uye we vari kupa gedhi kune vatengi vepasirese uye varidzi vebhizinesi kuti vaongorore mikana isingaenzaniswi yeAustralia Market.
Yedu Hofisi Hofisi inowanikwa kubva kuSydney - Australia uye bhizinesi redu iri pachena chose.
Iwe Unotenga, Tinotakura
Zvitoro zvakawanda zveAustralia zvepamhepo nenhengo dzeEbay hazvitumire kune dzimwe nyika, nepo vashoma vanowanzo bhadharisa mwero wekutumira wakakwira. Chero chero chitoro chaunotenga kubva, tichazotumira zvaunotenga kwauri kwauri padanho repasuo rako, uye nemitero yakaderera yekutumira muindastiri.
Kwete Australia kadhi rechikwereti? Tichakutengera iwe.
Zvitoro zvakawanda zveAustralia zviri online zvinongogamuchira kubhadhara kubva kuAU yakapihwa makadhi echikwereti / maAU ekubhadhara makero.
Hauna imwe? Ingoshandisa yedu Concierge sevhisi, isu tinotenga izvo zvinhu pachinzvimbo chako towana iyo AU. chitoro kuti vaendeswe kuAU yako. kero. Kana mapakeji (s) asvika, isu tinokuzivisa iwe neemail.
Usambofa wabhadhara mutengo wakazara wekutakura kwenyika. Zvekare zvakare.
Kugadzira kutenga kwakawanda uye kuda kuti mapakeji ako asanganiswe kuita kamwe chete? Unoda kuti mapakeji ako akaderedzwa kuti udzikise huremu hwekutumira? Kutsvaga yemahara yekuchengetedza uchimirira mamwe mapakeji kuti asvike? Izvi ndizvo chaizvo zvatinoitira iwe. Nesu kudivi rako, isu tinokubatsira iwe kuchengetedza kusvika ku90% pakutakura kwenyika. Paunonyanya kutumira, iwe unowedzera kuponesa!
Yakarambidzwa kana Yakatemerwa Chinyorwa (s)
Zvinhu zvinotsva uye zvinotsva zvinosanganisira pendi, maoiri, magetsi, mafuta ekuzora, nzara, mabhatiri akasununguka nezvimwe.
Zvinhu zvine kumanikidzwa senge bvudzi rinopfapfaidza, ruomba rwekuveura ndebvu, kana magaba ekupurudzira emhando ipi neipi uye zvinhu zvine njodzi zvakaita semafuta, makemikari, kana zvinoputika.
Zvinodhaka (chero chimiro kana chimiro), pfuti, zvombo, uye zvikamu zvadzo uye zvikamu, kusanganisira zvemauto, mapurisa nemidziyo yemhando ipi neipi, pfuti, repfuti repfuti, zvishongedzo zvepfuti, zvigadzirwa zvepfuti (magazini, clip, uye njanji masisitimu), zvombo , mapanga ane mashizha pamusoro pe6 ″, mapakatwa, uta hwemakomboni, mitsetse, kuburitsa zvombo zvakadai sekuvhundusa mabhatani kana pfuti dzakashongedzwa, kupfekedza pfuti kana zvikamu zvepfuti, pfuti dzependi uye nezvimwe, zviyero zvemaziso, zvinotariswa nemalaser, zvinoonekwa zveusiku, magirazi ekuona usiku, mahandcuffs nezvimwe zvinodzora, nemidziyo yekutarisa. Chaizvoizvo, kana ichigona kushandiswa sechombo, hatizoiendese.
Zvigadzirwa zvekurima senge zvirimwa, mhodzi, michero, uye nzungu.
Chikafu chisingaori chero cherudzi chinorambidzwa.
Mhuka uye zvigadzirwa zvinogadzirwa nehuswa hwemhuka zvinorambidzwa munyika zhinji.
Doro ripi zvaro rakawandisa, fodya uye nicotine zvigadzirwa zverudzi rupi zvarwo, kusanganisira e-midzanga uye nezvinhu zvayo.
Mari, mari, maodha emari, makadhi echikwereti uye echikwereti (kusanganisira makadhi akabhadharwa), mabhuru uye simbi dzinokosha, macheki, macheki, madhizaini emabhangi, zvitambi, mari dzinotorwa nemari, makadhi eGoogle, matikiti erotari, kana zvigadzirwa zvekubhejera uye zvigadzirwa.
Zvishongo nezvishongo nematombo akakosha zvinorambidzwa kune dzimwe nyika uye zvinongodzivirirwa kusvika pamadhora mazana mashanu. Chero chipi zvacho chishongedzo chezvishongo zvinopfuura iyo $ 500 yekutakura muganho ichave isina kuvimbiswa uye mutengi anotora njodzi yese yekurasikirwa pamusoro pemuganhu wakadai.
Mishonga yekunyorera inorambidzwa.
Zvinonyadzisira zvinorambidzwa munyika zhinji.
Ndapota taura nesu usati waisa odha yako, kana usina chokwadi nezve chero chigadzirwa kana chinhu.
Copyright 2012 - 2021 AUSFF chikamu cheRKH Enterprises Pty Ltd | ABN: 99 149 068 619
Nekuti makuki aya anonyatso fanirwa kuendesa webhusaiti, kuramba izvo kuchave nechinokanganisa mashandiro anoita saiti yedu. Iwe unogona nguva dzose kuvhara kana kudzima makuki nekushandura zvigadziriso zve browser rako uye kumanikidza kuvhara zvese cookies pane ino webhusaiti. Asi izvi zvinogara zvichikukurudzira kuti ubvume / kuramba makuki kana uchidzokorora yedu saiti.
Isu tinoremekedza zvizere kana iwe uchida kuramba makuki asi kudzivirira kukukumbira iwe zvakare uye nemutsa zvinotitendera kuti tivhengete cookie iyo. Iwe wakasununguka kusarudza chero nguva kana kupinda mune mamwe makuki kuti uwane ruzivo rwuri nani. Ukaramba makuki tinobvisa makuki ese seteni yedu.
Isu tinokupa iwe runyorwa rwe cookies yakachengetwa pakombuta yako mudura redu kuitira kuti ugone kutarisa zvatakachengetedza. Nekuda kwezvikonzero zvekuchengetedza hatigone kuratidza kana kushandura makuki kubva kune mamwe madomeni. Unogona kutarisa izvi muzviputi zvekuchengetedza browser.
Tarisa kuti uite kuvanda zvachose kwemubha yemharidzo uye urambe ma cookie ese kana usinga pinde mukati. Tinoda makuki maviri ekuchengeta ino. Ukasadaro iwe unozoperekedzwa zvakare paunovhura hwindo nyowani rekutsvaira kana nyowani tabo.
Dzvanya kuti uite / kudzima akakosha saiti cookies.
Isu tinoshandisawo akasiyana ekunze masevhisi seGoogle Webfonts, Google Mepu, uye vekunze Vhidhiyo vanopa. Sezvo vashandisi ava vanogona kutora data rako seyako IP kero tinokubvumidza kuti uvadzivise pano. Ndokumbira uzive kuti izvi zvinogona kuderedza zvakanyanya kushanda uye kutaridzika kwenzvimbo yedu. Shanduko dzingaite kana uchinge waregedza peji racho.
Dzvanya kuti uite / kudzima Google Mepu.
Google reCaptcha Zvirongwa:
Dzvanya kuti ugone / kudzima Google reCaptcha.
Bvuma kugadzirisaViga ziviso chete